हामी एनएमएलाई व्यवसायी, आरोही र मजदुरको बास्तविक हितकर संस्थाको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौँ : बोधराज भण्डारी – POKHARA TOURISM NEWS
HomeTourismहामी एनएमएलाई व्यवसायी, आरोही र मजदुरको बास्तविक हितकर संस्थाको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौँ : बोधराज भण्डारी
हामी एनएमएलाई व्यवसायी, आरोही र मजदुरको बास्तविक हितकर संस्थाको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौँ : बोधराज भण्डारी
महासचिव पदका उम्मेदवार नेपाल पर्वतारोहण संघ सँग गरेको कुराकानी
एन.एम.एमा तपाईको उम्मेद्वारीलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
एन.एम.ए.मा म लगायत मेरो सम्पूर्ण टीम पूर्णतः व्यवसायी, आरोही र मजदुर सम्मीलित समावेसी टिम हो । यसलाई तपाईँ परिवर्तनसिल विचार र एजेण्डा भएको समुहको रुपमा पनि लिन जहाँसम्म तपाईले मेरो उम्मेद्धारीको बारेमा प्रश्न गर्नुभो, मैले यो भन्दा पहिले सोट्टो नेपालमा अध्यक्ष नै नभए पनि नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेर काम गरिसकेको छु भने भिटोफ नेपालमा अध्यक्षको रुपमा काम गरिसकेको छु । भिटोफ नेपालले आज हाँसील गरेको उचाईका पछाडी मेरो भुमिकाको बारेमा सम्पूर्ण व्यवसायी लगायत तपाईहरु पनि जानकार नै हुनुहुन्छ ।
विगत ७÷८ वर्षदेखि म व्यवसायीक रुपले एन.एम.ए.संग पनि जोडिएको छु । त्यस क्रममा मैले एन.एम.ए.मा रहेका समस्या तथा त्यससंग सम्बन्धीत व्यवसायी, आरोही तथा आरोही मजदुरहरुका समस्याका बारेमा प्रसस्त जानकारी र ज्ञान हाँसील गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु । कतीपय मुठ्ठीभर सामन्ती सोच भएका व्यवसायीहरुले एन.एम.ए.लाई सधैभर आफ्नो सीकञ्जामा राखिराख्नुपर्छ र यो हाम्रो पुस्तौनी सम्पत्ती हो भन्ने ढंगले काम र व्यवहार गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्तिले एन.एम.ए.लाई सधैव पश्चगामी दिसातर्फ धकेलीरहेको छ । तसर्थ संघमा व्याप्त रहेको विसंगती र विकृतिलाई अन्त्य गरी संस्थालाई अल्पाईन व्यवसायी, आरोही र मजदुरको वास्तविक हितमा काम गर्ने संस्थाको रुपमा अगाडी बढाउनु म लगायत मेरो टिमको मुख्य मिसन रहेको छ ।
यो आरोही र मजदुरको संस्था हो भनिन्छ तर उनिहरुको हितमा अहिले सम्म कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन् । उनिहरुको पक्षमा तपाँहरुकाएजेण्डाहरु के के छन् ?
पहिलो कुरा एन.एम.ए. पर्यटनका अन्य संस्थाहरु भन्दा नितान्त भिन्न संस्था हो । यो व्यवसायी, आरोही र आरोही मजदुरहरुको छाता संगठन हो । मुख्य रुपमा यो नेपालमा भएका पीकहरुको अल्पाईन व्यवसाय संचालन गर्ने संस्था हो । तसर्थ यसको छुट्टै गरिमा र महत्व रहेको छ । जहाँसम्म आरोहि र मजदुरहरुको कुरा छ, उनिहरु विनाको एनएमएको कल्पना समेत गर्न सकिन्न । यो मात्र एउटा त्यस्तो संस्था हो जहाँ व्यवसायीको भन्दा आरोही मजदुरहरुको विशेष भुमिका र योगदान रहेको हुन्छ । तसर्थ हामीले हाम्रा एजेण्डाहरुमा आरोही र मजदुरलाई विशेष जोड दिएका छौँ । एनएमएले मात्र उनिहरुका हरेक समस्याको समाधान गर्न सक्ने भएकाले आरोही कल्याणकारी सामाजिक कोषको नीर्माण गर्ने, उमेर नाघिसकेका आरोहीहरुलाई जीविकोपार्जन सहज रुपमा गराउने वातावरण सृजना गर्ने, दुघटना एवं विरामी हँुदा आर्थीक सहयोग गर्ने, उनिहरुका सन्तानलाई उचित शिक्षा दिक्षाको व्यवस्था गर्ने, विगत ३÷४ वर्ष देखि आरोहण गरेर पनि प्रमाणपत्र नपाएकालाई प्रमाणपत्र उपलव्द्ध गर्न पहल गर्ने लगायत रहेका छन् ।
तपाईलाई व्यवसायीक संस्थाहरुमा आवश्यकता भन्दा बढि नै राजनिति भए जस्तो लाग्दैन् ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन् । किनभने राजनितिले पर्यटनलाई नभएर पर्यटनले राजनितिलाई तान्न जरुरी छ भन्ने मेरो धारणा हो । मैले यो कुन अर्थमा भन्न खोजेको भने हामीले राजनितिक तिक्डमबाजी गर्नुहुँदैन् । तर, राजनितिक नेतृत्वलाई पर्यटन राम्रोसंग बुझ्ने अवसर भने दिनुपर्छ । राज्यको निति निर्माणको तहमा उनिहरु नै हुने भएकोले पर्यटन नै नबुझिकन उनिहरुले हाम्रा कुराहरु कसरी समावेस गर्न सक्छन् ? तसर्थ पर्यटनमा अनाआवश्यक राजनिति चाही गर्नुहुँदैन् । तर, राजनितिक नेतृत्वलाई पर्यटनको गहिराई बुझ्न भने दिनुपर्छ ।
तपाई लगायत तपाईको प्यानल जित्ने आधारहरु के के छन् ?
म लगायत हाम्रो टीमको जीत लगभग सुनिश्चीत भईसकेको छ । मात्र त्यसले औपचारीकता हाँसील गर्न बाँकी छ । त्यसका लागि हामीसंग प्रसस्त आधार र प्रमाणहरु छन् । पहिलो कुरा हरेक व्यक्तिका विभिन्न राजनितिक आस्था विचार भए पनि हाम्रो टिम मुलतः व्यवसायीक टिम नै हो । यो प्रगतिशील र परिवर्तनगामीहरुको समुह पनि हो । सदस्य महानुभावहरुले पनि हाम्रो टीमको समावेसीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई बहुतै नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ । हामीसंग शेर्पा, तामाङ, मगर, नेवार, आरोही, महिला तथा अनुभवि व्यवसायीहरुको समावेसी प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
दोस्रो कुरा हामीले एनएमएको पुरातन इतिहासमा पहिलो पटम आमुल परिवर्तन चाहिरहेका छौँ । देशमा आमुल राजनितिक परिवर्तन भईसक्दा पनि एनएमए भने पुरानै निति नियम र कार्यक्रमअनुसार चलिरहेको छ । तसर्थ त्यहाँ नेतृत्व लिएका हाल सम्मका नेतृत्वकर्तामा पनि त्यही अनुरुपको सोच र व्यवहार हावि छ । हामी त्यसमा ब्रेक थु्र गर्न चाहन्छौँ । हामी संघलाई केहि मुठ्ठीभर माफियाहरुको सिकञ्जाबाट मुक्त गरेर यसलाई विशुद्ध व्यवसायीक, आरोही र मजदुरको बास्तविक हितकर संस्थाको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौँ । तसर्थ एनएमएलाई भ्रष्टहरुको हातमा नभएर पारदर्सी र परिवर्तशील शक्तिको हातमा सुम्पन म सम्पूर्ण सदस्यज्युहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।
अन्तमा तपाईहरुका चुनावि एजेण्डाहरु ठोस रुपमा बताईदिनुस न् ?
हामीले एनएमएलाई अहिलेको स्थानिय निकाय र प्रादेशीक संरचना अनुसार अघि बढाउनु पर्छ भनिरहेका छौँ । हामीले हाम्रा एजेण्डाहरु पनि त्यही अनुसार तय गरेका छौँ । पहिलो कुरा संघले संचालन गर्ने पिकहरु अहिलेको संरचना अनुसार विभिन्न प्रदेश र गाउँपालिकामा पर्दछन् । त्यसैले अव एनएमएले उनिहरुसंग सहकार्य गर्न जरुरी छ । दोस्रो कुरा आरोही र मजदुरका हरेक समस्याप्रति हामी गम्भीर र जिम्मेवार छौँ । तेस्रो र महत्वपूर्ण कुरा एक कार्यकाल मात्र नेतृत्व गर्न पाउने गरि संघको विधान संसोधन गर्न जरुरी छ । चौथो र अति महत्वपूर्ण कुरा चाहीँ हिमालहरुलाई वातावरणीय दृष्टिले स्वच्छ र सफा राख्न जरुरी छ । त्यसका लागि हिमाल सफाई अभियानहरु संचालन गरिनेछ । त्यसका साथै पर्यटनका अन्य संस्थाहरुसंग नजिक र घनिभुत सम्बन्ध बनाएर सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हुनेछ ।
भण्डारी स्नोइ होराईजन टे«क्स एण्ड एक्सपिडिसन् प्रा.लि.का संचालक हुनुहुन्छ ।